Momba anay - Suzhou Judphone-Auspicious Electronic Commerce Co., Ltd.
Amin'ny maha-mpanome vahaolana fanadiovana sy fanadiovana rivotra matihanina, Judphone dia manana mihoatra ny 6 traikefa an-taonany amin'ny R&D, manamboatra sy mivarotra vokatra fanadiovana rivotra isan-karazany, toy ny robot famonoana rivotra, mpanadio rivotra ary sivana. Miaraka amin'ny ekipan'ny mpahay siansa zokiolona, ​​injeniera ary teknisianina, manana fahaiza-mamolavola vokatra matanjaka izahay, serivisy aorian'ny varotra, ary koa ny orinasanay.OEM sy ODM mandray ny commande.
To combat Covid-19, manohy manavao ny vahaolana amin'ny famonoana otrikaretina sy fanadiovana ny rivotra izahay, mba hahafahan'ny olona miaina amin'ny tontolo azo antoka sy milamina. Lany ny vokatrayCE/ROHS/EN1822-1 ary fitsapana hafa.
Miorina amin'ny taratra ultraviolet UV-C avo lenta sy robot mobile autonomous, ary koa ny fampifangaroana amin'ny teknolojia plasma, ny robot fandripahana UV-Plasma haingana dia noforonina, izay matetika ampiasaina amin'ny famonoana rivotra (Virus, bakteria, na holatra dia azo miparitaka. eny amin'ny rivotra amin'ny alalan'ny fofonaina, firesahana, kohaka, nievina, vovoka, na asa rehetra izay mamokatra aerosol solida na ranon-javatra. ), famonoana otrikaretina ety ambonin'ny tany (Ny rora sy ny vongan-drano dia vokarina rehefa mikohaka na mifoka rivotra ny olona, ​​ka ny ankamaroany dia mianjera amin'ny tany sy zavatra akaiky, toy ny latabatra na telefaona. maso, sofina, vava ary orona), ary ny famonoana otrikaretina zavatra (Ny viriosy dia afaka mivelona amin'ny eny ambonin'ny zavatra hatramin'ny 5 andro, ary noho izany dia avo kokoa ny risika ho voan'ny aretina rehefa mifandray amin'ny zavatra ilaina andavanandro na zaraina mitovy. ipment. Ny famonoana otrikaretina tsy tapaka ny lahatsoratra isan'andro sy ampiasaina indray dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny viriosy sy ny bakteria eo amin'ny sehatry ny zavatra). Azo ampiasaina any amin'ny hopitaly, foibe fanaraha-maso ny aretina, orinasa fanafody, orinasa sakafo, fitaterana an-dalamby ary sekoly ny robots famonoana otrikaretina.
Ny robots famonoana zavona maina tsy miankina dia apetraka amin'ny hopitaly, sekoly, banky ary seranam-piaramanidina. Ny zavona maina dia miforona amin'ny alalan'ny atomizing 7.5% hydrogène peroxyde vahaolana amin'ny alalan'ny nozzle manokana eo ambany fanerena ara-batana, mba hamorona submicron sterilization anton-javatra ao amin'ny fanjakana zavona maina, izay afaka miparitaka malalaka eny amin'ny rivotra. Ny peroxyde hidrôzenina amin'ity fanjakana ity dia miasa haingana amin'ny bakteria sy micro micro-organismes hafa ao amin'ny tontolo iainana, izay afaka mahatsapa ny disinfection tsara amin'ny rivotra sy ny zavatra.
Ao amin'ny mpanadio rivotra sy ny sivana rivotra, dia misy teknolojia sy fitaovana fanadiovana rivotra maro samihafa ampiasaina, izay ahafahan'izy ireo manome rivotra madio sy azo antoka ho an'ireo mpampiasa anay. Ny teknolojia fanadiovana rivotra fampiasa matetika dia: teknolojia adsorption, teknolojia ion ratsy (positive), teknolojia catalytic, teknolojia photocatalyst, teknolojia photomineralization superstructure, teknolojia filtration mahomby HEPA, teknolojia fanangonana vovoka electrostatic, sns. fibre synthetic, fitaovana mahomby HEAP, mpamokatra anion, sns. Ny mpanadio rivotra dia mifoka, manimba ary manova ny loto isan-karazany amin'ny rivotra (amin'ny ankapobeny dia misy pm2.5, toy ny vovoka, vovobony, fofona manokana ary formaldehyde handravaka loto, bakteria I tsara, - ny tany am-boalohany , sns.), ary hampitombo amin'ny fomba mahomby ny kalitaon'ny rivotra ho an'ny trano fonenana, varotra ary trano indostrialy.
Ny orinasa rahavavinay, Jiangsu Judphone International Logistics Co., Ltd., dia orinasa logistika manana traikefa 12 taona amin'ny fanafarana sy fanondranana eo amin'ny sehatry ny fitaterana iraisam-pirenena. Miaraka amin'ny fanohanan'izy ireo sy ny fiaraha-miasa, dia nihena be ny saran-dalan'ny fitaterana ny vokatray, manome ny vokatray ho tsara kokoa ny tahan'ny fahombiazan'ny vidiny.